Wasiirada Adeegga bulshada oo ka warbixisay kulankii ay uga qeyb gashay dalka Tuniisiya
Wasiirada adeegga bulshada Xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kulankii 21 oo ay yeesheen wadamada Jaamacadda carabta qeybtooda hormarinta waxbarashada, iyo kulankii ay la qaadatay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga.
Maryan Qaasim wasiirada wasaaradda adeegga bulshada iyo wafdi ay hoggaamineyso oo ku sugan dalka Turkiga ayaa sheegtay in kulankii ay uga qeyb gashay magaalada Tuunis ee caasimada dalka Tuniisiya uu ku soo dhamaaday guul iyadoona xustay in shirkaasi waxyaabihii ay uga hadashay ay ka mid ahaayeen in Soomaaliya loo furo sanduuq loogu aruuriyo dhaqaalaha si loo hormariyo waxbarashada iyo dhaqanka.
Marwo Maryan ayaa xustay in ay kulan la yeelatay mas’uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda waxbarashada dowladda Turkiga iyadoona ka heshay balan qaadyo ku aadan hormarinta waxbarashada dalka Soomaaliya iyo sidii dhalinta Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarsho lacag la’aan ah.
Sidoo kale wasiirada ayaa intaasi raacisay in ay la kulantay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga dalka Turkiga ayna kala hadashay sidii iskaashi loogu sameyn lahaa hormarinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii wasiirada ayaa tilmaamtay in maalmaha soo socda dalka Turkiga uga qeyb gali doonto shir ay yeelanayaan wadamada caalamka kaas oo ay ka qeyb galayaan wasaaradaha hormarinta Qoyska.